ဗာနူအာဖီဂျီနှင့်သြစတြေးလျအနီးတစ် 80 ကွင်းဆက်ကျွန်းများကျွန်းစု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာတတိယ Bislama အဘိဓါန် (pidgin) ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ၎င်း၏သုံးတာဝန်ရှိသူတဦးကဘာသာစကားများထဲကနှစ်ခုဖြစ်ခြင်းနှစ်ဦးစလုံးဘာသာစကားများရရှိလာတဲ့ဗြိတိသျှနှင့်ပြင်သစ်တို့ကကိုလိုနီခဲ့သည်။ 1980 ခုနှစ်တွင်ဗာနူအာက၎င်း၏လွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့ပြီးနောက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအတည်ပြုခဲ့နှငျ့ "ဗာနူအာ၏သမ္မတနိုင်ငံ" ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဗာနူအာဗြိတိသျှဘုံဥပဒတရားစီရင်ရေးစနစ်အားအသုံးပြုသည်။ ၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေက၎င်း၏ပါလီမန်ဥပဒေသစ်များပြဋ္ဌာန်းခွင့်ပြုပေမယ့်တိတိကျကျလွှတ်တော်ကရုတ်သိမ်းသို့မဟုတ်ဥပဒေသစ်များနှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိသည့်ဖြစ်လာဖြစ်စေသည်အထိမဟုတ်ရင်ဗြိတိသျှ Pre-လွတ်လပ်ရေးဥပဒေများကိုဆက်လက်။
ကုမ္ပဏီများကအုပ်ချုပ်ကျောင်းအုပ်ကြီးဥပဒေများ 1991 ၏နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေနှင့်အတူ 1993 ၏ကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေ, ထိုဘဏ်လုပ်ငန်း, အာမခံလုပ်ငန်း, တံဆိပ်ခေါင်းတာဝန်နှင့် Trust မှကုမ္ပဏီများတမန်တော်ဖြစ်ကြသည်။ အစိုးရ၏ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုကော်မရှင်နာကဤဥပဒေများပြဋ္ဌာန်းခြင်းနှင့်ဗာနူအာအားလုံးကိုကုမ္ပဏီများမှထိန်းညှိ။
•အခွန်အခမဲ့: ကင်းလွတ်ကုမ္ပဏီများမှအားလုံးအခွန်ကောက်ခံမှုမှကင်းလွတ်ခွင့်ရသည်။ မှတ်ချက်: ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝင်ငွေအပေါ်အမေရိကန်အခွန်ထမ်းများနှင့်အခြားပေးဆောင်အခွန်မိမိတို့၏အစိုးရများအားလုံးကိုဝင်ငွေသတင်းပို့ရမည်။
•တစ်ခုမှာဒါရိုက်တာ: ကုမ္ပဏီ၏စီမံခန့်ခွဲရန်လိုအပ်သည်သာလျှင်တဦးတည်းဒါရိုက်တာ။ တစ်ဦးတည်းသောရှယ်ယာရှင် သာ. ကြီးမြတ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုများအတွက်သာညွှန်ကြားရေးမှူးနိုင်ပါတယ်။
•တင်ခဲ့သောကင်းလွတ်ခွင့်: စာရင်းစစ်အကောင့်မှတ်တမ်းများဖြည့်စွက်ခြင်းမှကင်းလွတ်ခွင့်ကင်းလွတ်ကုမ္ပဏီများ, နှစ်စဉ်ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများနှင့်ရိုးရှင်းတဲ့နှစ်ပတ်လည်ပြန် file ။
ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီများ (IC) ဆင်တူတစ်ခုကင်းလွတ်ခွင့်ရကုမ္ပဏီရောနှောသို့မဟုတ်ဗာနူအာအတွက်အခြားဥပဒေရေးရာ entity ရဲ့ကုမ္ပဏီအမည်ကိုဆင်တူဖြစ်သောနာမည်တစ်ခုကိုရွေးချယ်လို့မရပါဘူး။ ကုမ္ပဏီအမည်များကိုအင်္ဂလိပ်, ပြင်သစ်, သို့မဟုတ်အာရဗစ်, တရုတ်, ဂျပန်, သို့မဟုတ် Russian တူသောအခြားမည်သည့်ဘာသာစကားတွင်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
အမည်ကန့်သတ်ကုမ္ပဏီ၏အခြားနိုင်ငံ၏အစိုးရ, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးစည်ပင်သာယာအခွင့်အာဏာ, ဒါမှမဟုတ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အများပြည်သူအဖှဲ့အစညျးနှငျ့ခြိတျဆကျကွောငျးအကြံပြုချက်များသက်ဆိုင်ပါသည်။
ထိုကဲ့သို့သောဘဏ်လုပ်ငန်း, အာမခံလုပ်ငန်း, ရန်ပုံငွေများသို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းသို့မဟုတ်ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုများကိုအဖြစ်လိုင်စင်ရစက်မှုလုပ်ငန်းများပါဝင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုများအကြံပြုအမည်များတစ်တောင်းမည် ဘဏ္ဍာရေးလိုင်စင်.
သူတို့က၎င်း၏ကုမ္ပဏီအမည်၏အဆုံးမှာစကားလုံး "လီမိတက်" သို့မဟုတ်ယင်း၏နောက်ဆက် ", Ltd. " ပါဝင်ရမည်သို့မှသာကင်းလွတ်ခွင့်ကုမ္ပဏီများသည်ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုကုမ္ပဏီများမှဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါကင်းလွတ်ခွင့်, မသင်မနေရစာရင်းစစ်ရှောင်ရှားနှစ်ပတ်လည်အကောင့်ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်လိုအပ်သောနှစ်ပတ်လည်ပြန်လာအများကြီးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ပါဝငျသညျ။ တစ်ခုကင်းလွတ်ခွင့်ကုမ္ပဏီအဖြစ်အရည်အချင်းပြည့်မီရန်, ကုမ္ပဏီကြောင့်မသရုပ်ပြရမယ်:
ထို့အပြင်ခုနှစ်, ကင်းလွတ်ခွင့်ရကုမ္ပဏီများသည်အာမခံ, ဘဏ်လုပ်ငန်း, ဂေါပကန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်, ဒါမှမဟုတ်အာမခံစာရင်းစစ်အကောင့်များနှင့်ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီများကဲ့သို့တူညီသောစာရွက်စာတမ်းများ file ရမယ်ရောင်းချပါတယ်။
တစ်ခုကင်းလွတ်ကုမ္ပဏီထုတ်ပေးရသောခွင့်ပြုရှယ်ယာများ၏အတန်းနေသောခေါင်းစဉ်: မှတ်ပုံတင်ရှယ်ယာရှေးနုရှယ်ယာ, preference ကို၏ရှယ်ယာများနှင့်မဲပေးခွင့်နှင့်အတူသို့မဟုတ်မရှိဘဲအစုရှယ်ယာ။
တစ်ခုကင်းလွတ်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်ဒါရိုက်တာ၏နံပါတ်အဘို့အနိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒါရိုက်တာတစ်ဦးချင်းစီသို့မဟုတ်မည်သည့်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်ကော်ပိုရိတ်အလောင်းတွေဖြစ်နိုင်သည်။ တစ်ဦးတည်းသောရှယ်ယာရှင်ပိုကောင်းထိန်းချုပ်ရေးအတွက်တစ်ခုတည်းသောညွှန်ကြားရေးမှူးနိုင်ပါတယ်။
တစ်ခုကကင်းလွတ်ခွင့်ကုမ္ပဏီကုမ္ပဏီ၏အတွင်းရေးမှူးအဖြစ်ဒေသခံတဦးကခန့်အပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ အတွင်းရေးမှူးဒေသခံစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အစိုးရပုံစံတင်ပို့ရန်လိုအပ်ချက်များကိုနှင့် ပတ်သက်. တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ဖြစ်ရမည်။
နိမ့်ဆုံးအခွင့်အာဏာဝေစုမြို့တော်လိုအပ်ကင်းလွတ်ခွင့်ကုမ္ပဏီများမှ $ 10,000 အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ချက်: အမေရိကန်ဒေသခံများက၎င်းတို့၏ IRS ကိုအားလုံးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝင်ငွေထုတ်ဖော်ရပေမည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, တခြားလူတိုင်းပေးဆောင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝင်ငွေအခွန်ကသူတို့အခွန်အာဏာပိုင်များအားလုံးကိုဝင်ငွေသတင်းပို့ရမည်။
ကင်းလွတ်ခွင့်ရကုမ္ပဏီများသည်စာရင်းစစ်အကောင့်မှတ်တမ်းများသို့မဟုတ်နှစ်စဉ်ဘဏ္ဍာရေးထုတ်ပြန်ချက်များ file မှမလိုအပ်ပါ။ သူတို့ရဲ့နှစ်စဉ်ပြန်သည်အခြားကုမ္ပဏီများကတင်သွင်းတွေထက်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ကြသည်။
တစ်ဦးကဗာနူအာကင်းလွတ်ခွင့်ကုမ္ပဏီသည်ဤအကျိုးကျေးဇူးများကိုကမ်းလှမ်း: 100% နိုင်ငံခြားပိုင်ရှင်တွေ; အခွန်, privacy ကိုအများစုအစိုးရ FILE ကနေကင်းလွတ်ခွင့်, တစ်ခုတည်းသောညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်နိုင်သူတဦးတည်းရှယ်ယာရှင်နှင့်အင်္ဂလိပ်ကသူတို့သုံးတာဝန်ရှိသူတဦးကဘာသာစကားများတစ်ခုဖြစ်သည်မျှ။